I-Brazil Ngemuva Kwemidlalo: Ukuphumula Kwomuntu Wase-Beach
I-Brazil iyindawo yokuhlala abathandi be-beach. Njengoba idonsa ngamakhilomitha angaba ngu-4500, i-Brazili inenani elingapheli lamabhishi amahle. Iningi lamabhishi anomoya ozolile, onomfudumalo, okwenza indawo enhle kakhulu yokubhukuda, ukushisa i-sunbathing, nemidlalo yamanzi njenge-snorkeling, i-kite-surfing, ne-wind-surfing. Izivakashi eziya e-Rio de Janeiro, kulula ukudala iholidi lomuntu osebeni lolwandle eBrazil:
Ngaphandle nje kweRio de Janeiro, iCosta Verde yilo lonke iphupho lomncintiswano wasebhishi.
Lolu hlelo olululwa ogwini lubizwa ngokuthi "iGreen Green" ngezintaba eziluhlaza okweMat Atlântica (e-Atlantic Forest) ezithinta ogwini olusentshonalanga naseningizimu yeRio. Lo mgwaqo omkhulu ubeka indawo ephelele ukuhlola indawo yaseBrazil ebhishi ngenxa yokuhlushwa okuphakeme kwamabhishi aphansi.
Isimiso sokuqala kufanele sibe yi-Ilha Grande, isiqhingi esivela ogwini lombuso waseRio de Janeiro. Eyaziwa ngamabhishi ayo amahle nokuntuleka kwentuthuko, lesi siqhingi senza indawo enhle yokukhipha futhi ukujabulela imvelo. Uma usufike e-Angra dos Reis, ungathatha isikebhe ukusuka lapho ufike e-Ilha Grande, lapho uzofika khona eVila do Abraão, edolobheni elikhulu kunesiqhingi. Izimoto azivumelekile edolobheni, zinikeza i-vibe-back back.
Elinye lamadolobha aseBrazil awaziwayo kakhulu, i-Paraty ayinalo ngempela amabhishi amahle kepha indawo enhle kakhulu ukuqala ngenkathi ihlola amabhishi amaningi aseduzane. Indlela engcono kakhulu yokuhlola iziqhingi eziphazamisa amanzi eParaty ngesikebhe.
Ungenza lokhu njengengxenye yokuvakasha kweqembu elincane noma ucele othile ukuthi akuthathe. Iziqhingi ezincane kakhulu azikhombisi ukuthuthukiswa futhi ngaleyo ndlela zihlinzeke ngamabhishi ahlanzekile, ahlanzekile lapho uzohlala khona kuphela izivakashi.
I-Paraty ingenye yezindawo zakudala eBrazil. Izindlu zalo zombala ezimhlophe ezinezigubhu ezimibalabala kanye nezitaladi ezihamba ngamatshe ezinjenge-cobblestone zisho esidlule edolobheni njengesixazululo sokuqala kweBrazil .
Kusuka ezitolo zokudlela ezinhle kanye nezitolo zokukhumbula kanye namasonto wesitayela sobukhosi kanye nezindlu zokuvakasha ezithokozile, i-Paraty iyindawo ekhululekile futhi elula ukuyohlala eholidini lakho.
Emakhilomitha angaba ngu-30 phansi komgwaqo ovela eParaty yiTrindade, edolobheni elincane eliseziwa elwandle elingasetshenziswa ukuvakashelwa njengokuhamba usuku oluvela eParaty. Kukhona intuthuko encane lapha ngaphandle kwamakholomu alula ahambisa izinhlanzi ezishaywe ama-rice nobhontshisi kanye namanye ama- pousadas ayisisekelo (izivakashi).
I-Trindade ayifanele ukuvakashela hhayi kuphela umoya wayo othulile, okhululekile kodwa futhi nezimbobo zokubhukuda ezenziwe ngokwemvelo ezidalwe ngamatshe agxila ogwini. Izintaba ezihamba ngezinyawo zizokukhuphulela emagqumeni asehlathini ukuze uthole imibono enhle kakhulu yolwandle. I-Trindade yindawo enhle yokuvakashela emanzini aseduze - buza abantu bendawo lapho ungathola khona ama- cachoeiras .
Ngaphesheya komgwaqo ngemuva kokungena esifundeni saseSão Paulo yindawo encane yokudoba yasePicinguaba. Inani labantu basemaphandleni ambalwa kuphela, futhi idolobha livikelwe ngempela njengengxenye yepaki yesifundazwe, ngakho ukuthuthukiswa ngeke kuphazamise ubuhle bale ndawo. Ukuthula, amabhishi asezindaweni ezihle futhi abantu abanobungane balindele, futhi kukhona ukubambisana kwabaculi bendawo lapho ungabuka khona ubuciko bendawo futhi mhlawumbe uthole imemori ehlukile.
Ungasebenzisa kalula izinsuku ezimbalwa uhlola i-Ilha Grande, i-Paraty, i-Trindade ne-Picinguaba. Zonke zingafinyelelwa ngemoto, futhi ukushayela okuhle okuvela eRio kuya ogwini kungumunye okumele uyikhumbule. Uhlelo lwebhasi lendawo lukukhethwa kulabo abangenawo noma abaqasha imoto. Amabhasi ahamba esuka eRio de Janeiro eya e-Angra dos Reis (idolobha lapho ungathola khona isikebhe ukuya e-Ilha Grande) naseParaty. Uma useseParaty, ungathatha ibhasi lendawo ukuya eTrindade.
Izinketho zokuhlala ezivamile kakhulu ziyi- pousadas , izindlu zokuhlala ezivame ukwenziwa komndeni futhi zifaka ibhulakufesi enhle futhi ehlanzekile, ekhululekile.
Izidakamizwa zaseMelika neziphuzo Uzolahlekelwa eBrazil
Ukuphatha Okuhle kakhulu kumidlalo yama-Olympic
Ngenyanga eyodwa ngaphandle: Ingabe i-Brazil ikulungele ama-Olympic?
Izithelo Okumele Uzame eBrazil
Ingabe Ukuphuza Amanzi Okuphuza eBrazil?
I-Alabama Crimson Tide Football: Umhlahlandlela Wokuhamba weMidlalo eTuscaloosa
I-Hilton Hawaiian Village Penguin Colony
Ukwenyuka Okuqakathekileko Kwakhiwa I-Home for the Piestewas
I-Haunted Boston: I-Self-Guided Ghost Tour
I-Busch Gardens Williamsburg Roller Coasters Igalari yezithombe
I-Ramadan Foods eMalaysia naseSingapore
Umhlahlandlela WaseNtshonalanga yaseSt. Paul Gay - iSt. Paul Gay Guide Yokudlela
I-Haunted Hotel: I-Omni Parker House eBoston
Ukuzingela Okuphezulu Kwezifiso Zomphakathi e-Arkansas
432 Park Avenue: I-Deal kwi-"Matchstick Building" ye-NYC
Ukuvakasha kwe-Foxwoods: Omunye wama-Casino amakhulu kakhulu aseMelika
Ngingayibheka Kanjani Isimo Sokusebenza Kwami SePasipoti sase-US?
I-State State Fish yaseNyakatho Carolina
Izinto ezizokwenziwa ku-DUMBO ku-Front Street